Toriteny alahady 07 Jolay 2013 | FJKM Amboniloha
Toriteny alahady 07 Jolay 2013
“Manantena fitahiana ny mino”
II Samoela 7 : 28 -29, Matio 19 : 27 – 30, Asan’ny Apostoly 3 : 22 – 26
Manoloana io lohaheitra mikasika ny fitahiana io dia ireto misy tolo–kevitra vitsivitsy aroso ho antsika ho tari–dala ahatanteraka izany fitahiana omen’Andriamanitra izany.
1- Ny fitahiana dia fanomezana avy amin’Andriamanitra
(2 Samoela 2 19 : 27 –30)
Tantaran’I DAVIDA Mpanjaka, na dia Mpanjaka nanana ny fahendrena aza dia tsy Izy no nasain’I Jehovah nanao ny Tempoly fa ny zanany. Tsoa-kevitra, taomina iska hanontany an’I Jehovaha mandrakariva amin’ny fikasana rehatra ato anatintsika fa Izy ihany no manana fahefana afaka hanatanteraka izany. Izay ilay fitahiana. Tsarovy izany ry havana fa ny harem-pitahiana rehetra dia tsy maintsy ao amin’Andriamanitra. (fahasalamana, asa, sns…)
2- Inona ry no tokony hatao ?
(Matio 19 : 27 – 30)
« Manaraha ahy dia mahafoiza » Hanaraka anao izahay hoy ny Apostoky ? VOKANY Tonga olom-baovao izy .
Raha te higoka-fitahiana ao amin’Andriamanitra dia meteza hiaina ao anaty fiainam-baovao ary mandray fanapahan-kevitra hanara-dia ny Tompo .
Izany hoe ny fahafoizana ho an’Andriamanitra dia : Manaraka azy alou dia avy eo mahafoy (fahafoizan-tena no tena tiana ambara eto ). Mitaky fanoloran-tena ny fanokafan’Andraianaitra ny lanitra mba handrotsahany fitahiana ho an’ny olona .
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 11 juillet 2013